समाचार - २०२१ मा किन्न को लागी सबै भन्दा राम्रो झार ग्राइन्डर को एक पूरा गाइड।
कुनै फरक पर्दैन यदि तपाइँ vape, रोल जोडी वा बोंग rips लिनुहोस्; जब यो धूम्रपान झार को लागी आउँछ, त्यहाँ सधैं केहि छ कि तपाइँसँग हुनु पर्छ: एक उचित चक्की। यहाँ अहिले बजार मा सबै भन्दा राम्रो grinders को लागी हाम्रो छनौट हो।
कुनै फरक पर्दैन यदि तपाइँ एक भांग नौसिखिया वा एक अनुभवी उत्साही हुनुहुन्छ जब यो झार को लागी आउँछ, त्यहाँ एक सफल सत्र को लागी केहि महत्वपूर्ण छ: ठीक तरिकाले जमीन जडी बूटी। जे होस् यदि तपाइँ एक धूम्रपान गर्ने वा एक vape- प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ, एक चीज जुन तपाइँ सधैं तपाइँ मा हुनु पर्छ तपाइँको चक्की हो। कारण सरल छ; तपाइँलाई ठीक, कटाईएको घाँटी चाहिन्छ जुन सजीलो जलाउन सक्छ। किन? किनभने अधिक सतह क्षेत्र राम्रो highs मतलब।
केहि मानिसहरु कैंची प्रयोग, तपाइँको औंलाहरु पनि चाल गर्न सक्छन्, तर कुनै विधि पुरानो विश्वसनीय चक्की तुलना। तिनीहरू सबै आकार र आकार मा आउछन्, तपाइँ उनीहरुलाई कुनै पनी सामग्री मा तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, र भर्खरको आविष्कारहरु संग, तपाइँ केहि पाउनुहुनेछ कि डिजाइन र कार्यक्षमता को मामला मा प्रभावशाली छन्। आविष्कार र टेक्नोलोजी लगातार पीस प्रक्रिया सुधार गर्दै छन्, र यदि पीस विकसित, धूम्रपान पनि विकसित।
अहिले बजार मा सबै भन्दा राम्रो grinders को यो चयन को जाँच र एक ग्राइन्डर बाकी बाट बाहिर खडा बनाउँछ हेर्नुहोस्।
किन एक घाँस चक्की प्रयोग?
तीखा दाँत र एक सानो हात शक्ति, वा एक बटन को प्रेस यदि तपाइँ fancier बिजुली प्रकार को एक संग काम गर्दै हुनुहुन्छ, एक घाँस ग्राइन्डर तपाइँको जडी बूटी फाट्छ ताकि तपाइँ तपाइँको औंलाहरु लाई छोड्न वा बलिदान मात्र छैन कैंची को एक जोडी तपाइँ घरमा छ। नतिजाको रूपमा, तपाइँ पसीना बिना बिल्कुल धुम्रपान योग्य जमीन कली पाउनुहुन्छ।
जब तपाइँ एक ग्राइन्डर बिना सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ इष्टतम जलाउन को लागी तपाइँको जडी बूटी लाई सकेसम्म ठीक गर्न सक्नुहुन्न, खास गरी यदि यो त्यो चिपचिपा icky हो। उल्लेख गर्न को लागी, तपाइँ किफ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, रेजिनस ट्राइकोम्स जुन तपाइँको कली मा चम्किन्छ र शक्तिशाली शक्तिशाली हुनुहुन्छ। कम से कम सजीलो छैन।
तपाइँ मिनेट काट्न, वा नराम्रो, तपाइँको कली उठाउन खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। वा, तपाइँ एक ग्राइन्डर को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड मा तपाइँको लुगाफाटा भंग गर्न सक्नुहुन्छ र किफ पाउन सक्नुहुन्छ, जुन तपाइँ यसलाई बढाउन को लागी तपाइँको फूल मा छर्कन सक्नुहुन्छ। केक मा टुक्रा बारे कुरा गर्नुहोस्।
Grinders पनि एक जलाउन सुनिश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाइँ चंकी कली संग एक कटोरा प्याक गर्नुहुन्छ, तब तपाइँ एक कटोरा प्याक को रूप मा पूरा गर्न सक्नुहुन्न, र तपाइँ अनिवार्य रूप मा यो बर्बाद गरीरहनु भएको छ किनकि यो राम्रो संग यो गर्मी गर्न सक्दैन। यसबाहेक, यो हलचल गर्न को लागी गाह्रो छ, र अधिक बारम्बार भन्दा, त्यहाँ अझै पनी केहि हरीयो बाँकी छ, जुन तपाइँले महसुस गर्नुहुन्न जब सम्म तपाइँ "राख" बाहिर डम्प गर्न जानुहुन्छ।
संयुक्त र कुंद धुम्रपान गर्नेहरु एक झार ग्राइन्डर बाट लाभान्वित हुनेछन्। घाँटी कि एक ठीक (तर धेरै राम्रो छैन) को माध्यम बाट पीस समान रूप बाट कागजहरु मा बाहिर राखीएको छ र रोलिंग प्रक्रिया ब्रीजी बनाउन सक्छ। र उनीहरु राम्रो धूम्रपान गर्छन्।
घाँस ग्राइन्डर को प्रकार
म्यानुअल grinders र बिजुली grinders: घाँस grinders को दुई मुख्य प्रकार छन्। म्यानुअल grinders संग, एक सानो धेरै प्रयास आवश्यक छ। तपाइँ मोडिनु पर्छ र काम पूरा गर्न को लागी तपाइँको हात को उपयोग गरीन्छ।
एक म्यानुअल ग्राइन्डर को लागत को लागी, मूल्यहरु फरक फरक छन् तर धेरै ताना समुदाय द्वारा किफायती मानिन्छ। यो सबै प्रकार मा निर्भर गर्दछ, किनकि त्यहाँ म्यानुअल grinders को धेरै किस्महरु छन्:
२ टुक्रा घाँस चक्की: पीस र भण्डारण को लागी एक डिब्बा।
3 टुक्रा झार ग्राइन्डर: दुई डिब्बा, एक पीस र एक भण्डारण को लागी।
4-टुक्रा झार ग्राइन्डर: तीन डिब्बे, एक पीसने को लागी, एक भण्डारण को लागी, र एक एक स्क्रीन संग पूरा किफ को लागी।
यद्यपि उनीहरु लोकप्रिय छैनन्, त्यहाँ ५ टुक्रा म्यानुअल ग्राइन्डरहरु पनि छन्। यस प्रकार को सामान्यतया चार डिब्बहरु छन्: पीस, भण्डारण, र किफ को लागी दुई। दुई किफ पकड्नेहरु संग तपाइँ अधिक शक्तिशाली फूल पाउडर पकड्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो अतिरिक्त सानो बिरुवा सामाग्री जाल गर्न को लागी एक अतिरिक्त स्क्रीन छ।
एक कार्ड चक्की म्यानुअल ग्राइन्डर को कुनै अन्य डिब्बों छैन र स्लिम र पोर्टेबल को एक अन्य प्रकार हो। कार्ड grinders अन्य मैन्युअल grinders रूपमा राम्रो संग पीसने छैन, न त उनीहरु kief कब्जा हुनेछन्, तर उनीहरु सस्तो छन् र एक सजिलो पीस मा जाने को लागी बनाउन।
अलग भागहरु को एक फरक संख्या संग बनाइयो बाट, घाँस grinders बिभिन्न सामाग्री बाट बनेका छन्, जसको प्रत्येक यसको पेशेवर र विपक्ष छ:
प्लास्टिक: सस्तो, हल्का, एक ठीक पीस प्रदान गर्दछ, लामो समय सम्म टिक्दैन, र अधिक तोड्ने सम्भावना।
काठ: अद्वितीय, जैविक, धातु shavings उत्पादन मा हुन सक्छ र पीस गर्न को लागी अधिक प्रयास लिन्छ।
एल्युमिनियम: धातुहरु को सबैभन्दा सस्तो, प्लास्टिक भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ, प्लास्टिक भन्दा धेरै तौल, प्रयोग गर्न सजिलो, र एक राम्रो पीस प्रदान गर्दछ।
टाइटेनियम: गुणस्तरीय को उच्चतम, एल्युमिनियम को रूप मा धेरै तौल गर्दैन, सबैभन्दा महँगो, अन्तिम सम्म निर्मित, र प्रयोगकर्ता को अनुकूल।
अन्तमा, तपाइँ बिजुली grinders छ। बिजुली grinders तपाइँको लागी सबै काम गर्दछ, र केहि पनी तपाइँको घाँटी छुटकारा दिनेछ, जसले उनीहरुलाई रोलिंग को लागी उपयोगी बनाउँछ। उनीहरु pricier पक्ष मा हुन्छन् र kief संरक्षित गर्दैनन्, तर यदि तपाइँ गठिया संग कोहि हुनुहुन्छ वा दुखाइ हात छ, बिजुली grinders पीसने प्रक्रिया बाट तनाव टाढा।
सर्वश्रेष्ठ खरपतवार चक्की ब्रान्ड
यदि तपाइँ सोच्नुभयो कि गिलास र vaporizers को चयन व्यापक थियो, तब तपाइँ कहिल्यै सबै भन्दा राम्रो घाँस ग्राइन्डर को लागी खरीदारी को कोशिश गरीयो। त्यहाँ हजारौं उपलब्ध छन्, र उनीहरु जताततै छन्, हेडशप बाट अमेजन सम्म। तपाइँ पनी ग्राइन्डर को लागी किनमेल गर्दा जोखिम मा चलाउनुहुन्छ किनकि तपाइँलाई थाहा छैन यदि उनीहरु काम गर्न जाँदैछन् जब सम्म तपाइँ उनीहरुलाई किन्नुहुन्न। त्यहाँ केहि चीजहरु एक उपकरण मा पैसा बर्बाद गर्नु भन्दा खराब छ कि एक कमजोर काम गर्दछ।
सही ब्रान्ड छनौट सबै चीज हो जब तपाइँ सबैभन्दा राम्रो घाँस चक्की को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि ब्रान्ड एक खराब प्रतिनिधि छ, तब तपाइँ एक घटिया, बेकार उत्पादन प्राप्त गर्ने आशा गर्न सक्नुहुन्छ। जब सबै भन्दा राम्रो झार ग्राइन्डर ब्रान्ड को लागी खोज, तारकीय समीक्षाहरु र प्रशंसापत्रहरु संग स्कोप सुनिश्चित गर्नुहोस्।
पोस्ट समय: अगस्त-17-2021